Ithimba elisha elizophenya ngabasocongi | IOL Isolezwe
Ithimba elisha elizophenya ngabasocongi
Isolezwe / 15 August 2012, 3:13pm /
Ungqongqoshe wezamaPhoyisa kuleli uMnuz Nathi Mthethwa, uNdunankulu waKwaZulu-Natal uDkt Zweli Mkhize noNgqongqoshe wezokuPhepha esifundazweni uMnuz Willies Mchunu ngesikhathi kwethulwa ithimba elizophenya ngamacala okubulawa kosopolitiki KwaZulu-Natal izolo
KUJUTSHWE ithimba eliholwa ngosigaxamabhande abaphezulu kuleli elizolekelela ukuphenya amacala athinta ukusocongwa kwabaholi bamaqembu ezombusazwe okuhlasele KwaZulu-Natal.
Lokhu kumenyezelwe izolo uNgqongqoshe wamaPhoyisa kuleli uMnuz Nathi Mthethwa esithangamini sabezindaba eThekwini ngemuva komhlangano obusesithe abenawo nabaholi bamaqembu athintekayo ezepolitiki.
Echaza uMthethwa, uthe leli thimba lizoholwa nguLt General Chris Ngcobo oyinhloko yezobuNhloli kuzwelonke no-Lt General Vishnu Moono oyinhloko yabaSeshi kuzwelonke.
“Esingakusho ukuthi ukhona umsebenzi obonakalayo owenziwe ngamaphoyisa ngoba kukhona abantu ababoshwayo kulezi zigameko njengoba kukhona oseboshiwe ngokufa kukaMnuz Wandile Mkhize waseHibiscus Coast. Ngaphandle kwalokho leli thimba lizosebenzisana naleli ebelivele likhona esifundazweni,” kusho uMthethwa.
Kulo mhlangano bekukhona abaholi bamaqembu ahlukene okuyiNFP, ANC ne-IFP bezoxoxisana noMthethwa ngalolu daba.
Leli thimba limenyezelwe ngemuva kokuthi emasontweni edlule uhulumeni waKwaZulu-Natal unxuse ukuthi kube nokungenelela kukahulumeni kazwelonke esifundazweni ngenxa yokwanda kwezigameko zokubulawa kwabaholi.
Ngaphandle kwalokho namadlelandawonye kaKhongolose ahlabe ikhwelo ngesikhathi enengqungquthela yesifundazweni ebise-UKZN eHoward College ngenyanga edlule, lapho ephonse inselelo kuhulumeni kazwelonke ukuthi sekufanele alusukumele udaba lodlame ngoba selungaphezu kwamandla .
Abaholi bamaqembu basishayele ihlombe lesi sinyathelo sokujutshwa kwaleli thimba kanti bonke bakhombise ithemba nokuzibophezela ukuze kube nokuthula esifundazweni.
USihlalo we-IFP esifundazweni uMnuz Mbangiseni Yengwa uthe bazoyeseka imizamo kaNgqo-ngqoshe yokuqinisekisa ukuthi kuba noxolo nokubekezelelana.
USihlalo we-ANC uDkt Zweli Mkhize uthe uthe njengoKhongolose bazoqinisekisa ukuthi bahlangana nawo wonke amaqembu ukubhunga ngokungasiza ukudala ukuthula nasekulekeleleni imizamo yamaphoyisa ukulwa nobugebengu.
USihlalo we-NFP uMnuz Maliyakhe Shelembe uthe bawubona uyisixazululo lo mhlangano njengoba uNgqongqoshe ememezele leli thimba elizobheka izigameko zokubulawa kosopolitiki.
Kusuka ngo-2008 KwaZulu-Natal kusocongwe abaholi bezombusazwe abangu-32 ngokombiko ovezwe nguNgqongqoshe wezokuPhepha esifundazweni .
I-NFP yona ilahlekelwe abaholi abangu-22 kusuka selokhu yasungulwa kanti i-ANC yona ilahlekelwe abathathu kusuka kudlule ukhetho lohulumeni basekhaya .
Kwezinye izigameko kula maqembu abaholi banukana bodwa ngenxa yezingxabano zokubanga izikhundla .